Mandroso, mandroso, mandroso… | NewsMada
Mandroso, mandroso, mandroso…
Ao anatin’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna izao. Mby aiza? Eo ny vahoaka mandinika, mandanjalanja, mampitaha, misafidy… Hanao ahoana? Raha Antananarivo manokana, ohatra, noho ny maha Renivohitr’i Madagasikara azy: arivoarivo ny olana, mila olona arivoarivo.
Amin’izany, tena mampiteny ny moana sy mampitampim-bava, ohatra, ny loto sy fako, na aiza na aiza. Hatao ahoana? Misy ny kandidà manana fandaharanasa mazava ny amin’izany. Hatao miainga any ifotony eny anivon’ny fokontany ny fisahanana sy ny fandraharahana ny fako: azo amoronana asa, ahodina ho angovo toy ny herinaratra.
Ohatra ihany ny loto sy ny fako, raha ny olana arivoarivo eto Antananarivo. Mandra-pitranga izay hitranga amin’ny voka-pifidianana: inona ny anjaran’ny isam-batan’olona amin’ny olana isan’andro vaky? Azo antoka fa tsy ho hay tohaina ny fandresen’ny fanovana noho ny hetahetam-pandrosoana mampinainaina ny maro.
Inona ny mahatonga ny loto sy ny fako tsy mahafa-bela izay ela izay? Fanilihana andraikitra, tsy fahampian’ny enti-manana sy ny fitaovana… Ary ny olana amin’ny olona tsirairay, mba ahoana indray? Ny fahantrana efa ho lava, ny toerana misy ny tena, ny fotoana… Tsy hita hovisavisaina sy hotanisaina fa mahavalalanina sy mahafanina.
Tsy mba manana fotoana isasana ao anatin’ny iray andro na herinandro ve, ohatra, ireny tsy dia madio loatra hita eny an-dalambe rehetra ireny? Na tsy mahita rano na savony, na tsy mieritreritra izay hidio; eny, sanatria, tsy mahalala akory ny mahasoa sy mahatsara ny madio. Miara-dalana mandrakariva amin’izany ny hoe filaminana.
Na toy inona ezaka amin’izay hoe fanovana sy fandrosoana, ny tsirairay no mila resy lahatra sy mangetaheta izany. Miainga eo aminy izay atao, alohan’ny iandrasana ny hafa. Amin’izany ny hoe mandroso ny isam-batan’olona, ny isan-tokantrano, ny isam-pokontany, ny kaominina… Mandroso, mandroso, mandroso…